Mbiru nhatu dzeKutsvaga Injini Kugonesa | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 16, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Tsvaga Injini Kugonesa (SEO) zvachinja pamusoro pemakore asi vazhinji nyanzvi havana kuramba vakakwira. Ndichiri kuenda kuzviitiko uko vatauri vanotaura nezvemaitiro echinyakare uye vanopa varidzi vebhizimusi ruzivo rwakashata.
Isu hatisi kungoshama paSEO, tanga tiri vatungamiriri mune ino indasitiri kwemakore mazhinji. Isu takawana zvakare chinzvimbo chinoshamisa chevatengi vedu… zvichikonzera mimwe mibairo tichideredza mitengo yekuwana.
Paunokurukura zano reSEO, ita shuwa kuti yako yekutsvaga yekushambadzira agency iri kutaura kune yega yega mbiru nhatu dzekutsvagisa injini uye chinzvimbo. Mune zvinotevera Mharidzo yeSEO, iwe uchaona manotsi pane yega yega yemasiraidhi ayo akabatanidzwa neiyo icon inomiririra mbiru. Kune basa rakawanda rakabatanidzwa!
SEO haisi kungoongorora mazwi makuru uye kuita kuti mapeji atarike zvakanaka kune yekutsvaga injini. SEO inoda kutsvagisa padomeini pachayo kuti unzwisise kuti zvichanetsa sei kuwana chinzvimbo. Izvo zvakare inofanirwa kusanganisira yakazara nzira yekuti unganyatso kusimudzira sei zvako zvemukati. Kugadziridza-pa-saiti kunogona kukuwanira iwe ... asi kusimudzira kwepasipo-saiti kuchakupa iwe # 1 nzvimbo. Ichi chinhu cheSEO icho zvakawanda zvemaitiro hazvikurukure nevatengi vavo nekuti ivo havana zano rinoshanda rekusimudzira kunze-saiti kusimudzira.
Tags: mbiru nhatu dze seo